Ekhulwini XIX, zinyanga German romantic Genrih Geyne wadala inkondlo, okuyinto busekelwe othandweni lwakhe unrequited. izinguqulo yakhe yezimbongi Russian. Ngasinye ngendlela yalo. Kodwa ukuhumusha okungcono namanje kwenziwe Mikhail Lermontov. "Pine" - a izinkondlo elincane kodwa enhle kokuvamile mayelana nesizungu ukulangazelela.
Genrih Geyne kwaba intatheli hhayi kuphela behlakaniphile, kodwa futhi master consummate uhlobo lyrical. Njengoba wanquma ukuchitha inkondlo yakhe ayithandayo ebhala enothini sokulangazelela isihlahla enyakatho. Imisebenzi babe lyrical ngokujulile. Futhi emva kweminyaka eyishumi nambili ka imbongi Russian Mikhail Lermontov, wahumushela ke, elalikade awupheli. translation Literary akuyona uyakuthanda imbongi, futhi aholela ekubeni lesi sikhathi alwaziwa. Kodwa, noma kunjalo, le nkondlo ukuhumusha Russian ngokushesha aba lalo umsebenzi Lermontov sika. Iqukethe Motifs, vala yonke imisebenzi zezinkondlo Russian. Luhlatiyo inkondlo Lermontov sika "Pine" nemisebenzi imbongi German kunikela umqondo wokuthi indlela lokho okwehlela kwangaphakathi yalezi abalobi ababili abanamakhono ahlukene.
Esikhathini sokuqala, kukhona izithombe ezimbili: * nomthidari, entendeni. Futhi sonwele ngesiJalimane - wesilisa. Heine alalelwa omkhulu ekuzuzweni kwemiPhumela euphony emisebenzini yakhe lyrical. Futhi inkondlo yakhe kukhona insada eside unkamisa umsindo, kwakheka umphumela izinkanuko emnene. Igama kuphela elingenalo ubumnene - Ein Fichtenbaum, okuyinto elihunyushwe kusho "sonwele". Nale reception kumbhali lwemisindvo linikeza isithombe rigidity esihlahleni futhi abesilisa ababhekwa ngayo. Ehunyushiwe imbongi Russian master isithombe - zikaphayini. Lermontov wabhala inkondlo esekelwe imisebenzi usumisiwe, kodwa lamshiya into eyingqayizivele.
I ukufa kabuhlungu ngobunjalo izici Mihaila Lermontova kubonakala e isosha esihlatshelelwayo yakhe. Motif yesizungu itholakala ezinhlotsheni eziningi yemisebenzi yakhe. Ngokuvamile la mazwi atholakala izinkondlo zakhe, ngokuthi "omunye", "nginesizungu."
Umama imbongi sesikhathi esizayo bancishwa ebuntwaneni. Ngakhulela ezingenaye ubaba. Lapho engena inyuvesi, kwakungekho muntu owakhuluma. Yena bekulokhu friendly alien isosha esihlatshelelwayo, eduze ngakho izithixo zakhe Pushkin. Abangane wayengenaso. uhlamvu angawodwa aqala ukuhlelwa ukuba ziyaphuma ebuntwaneni, lapho ngenxa umzamo ugogo kwabakhulelwe, imbongi sesikhathi esizayo bancishwa ngokuphelele ukunakwa kayise.
Kamuva, lapho Lermontov esekhulile, wayazi ukuphoxeka ngenye indlela. Ngoba kwaba nenhlekelele real isimo sezombangazwe e-Russia. Ukudumazeka liphenduke umuzwa wokuba nesizungu, futhi kwale mizwa bukaJehova kubonakala emisebenzini efana "Span", "eweni", "ngiphuma wedwa endleleni", "Pine". Lermontov inkondlo ngesihlahla 'phezu Wild North "yalotshwa 1841, ie ngonyaka sokufa kwakhe. Futhi ukubhala lo msebenzi lyrical wayengomunye walaba Ezimweni ezingavamile lapho ayiyona wawungaphansi yasekuqaleni.
Ivesi lokuqala Sizokwenza abandayo, kodwa emhlabeni wangempela, lapho ihlala khona isihlahla. Amandla phezu phezulu angenalutho - uphawu yesizungu. Lonely eqandisiwe isihlahla ufisa futhi napping. Imizwa yabo kumbhali sidlula lesi sithombe. Phela, ubuye wakhe wonke kuphila okufushane umuzwa abayiqondi, izizwe inesizungu.
Lermontov izihlahla ukunika ikhono ukuzizwa, ukuphupha, ukuze udabuke. Lokhu kuvumela bona aveze ngobuqotho imizwa yabo ejulile. Kodwa imbongi yena ngesikhathi esifanayo eveza ukungakholelwa ukuba khona umuntu abasondelene naye. Phakathi nokuphila kwakhe iDemo wayenezizathu ngokwanele sokungabaza zibonise ukwethembeka labesifazane.
Ingxenye yesibili le nkondlo lusiyisa ezweni libalele, lapho, sifana nomuthi zikaphayini, emthini wesundu ikhula edabukisayo. Bobabili isihlahla isifazane. Nakuba umlobi German ukwethula ukuqhathanisa izithombe iduna nensikazi ukuthi ukhuluma kakade mayelana nesihloko eyinhloko Heine. Ukuze German romantic lyrical isisusa esiyinhloko kwaba ukuhlukana othandekayo wakhe, okuyinto akulona inkondlo "Pine". Lermontov inkondlo abazinikezele kunalokho isifiso sakhe ukuba liqondwe futhi wezwa.
Nokho imbongi kule isifiso ukuqeda isizungu kanye ukuthola othandekayo ezidalwe umcabango hhayi isithombe umngane okungokomoya, futhi ifomu zesifazane. Lokhu zikubeka ngokucacile emigqeni lokugcina senkondlo, lapho uku isithombe iphupho "izihlahla ezinhle sesundu."
Reality futhi iphupho
Isihloko isizungu waphenduka ngokuphindaphindiwe Lermontov. Pine (ukuhlaziya umkhiqizo ibonisa ukuthi lesi sithombe akuyona ngempela lyrical) enkondlweni eveza ngezinga eliphakeme lezi emizweni. Imbongi okubonisa umoya yithemba ngokwakha emihlabeni emibili ezincane: abandayo futhi kushisa. Esikhathini zikaphayini wokuqala kuyo, okwesibili - wesundu. Futhi abasoze ndawonye. Ukusebenzisa okungafani aleli South, umlobi Kubeka ngemfe iphindiwe.
Dream noma iphupho?
Ukungqubuzana ngamaphupho ngokoqobo - inqubo esebenzisa enguqulweni yakhe Lermontov. Pine Russian imbongi Pines embozwe yiqhwa. Yena amaphupho ogwadule elikude, kodwa iphupho akasoze abe ngokoqobo. Lona omunye umehluko kulokho eqale iyikho. Ngo-German, "iphupho" futhi "ukuphupha" - amazwi okuyizinto eduze value belingana umsindo. imbongi German uthi: «Eri träumt von einer Palme», okungase elihunyushwe ngokuthi "amaphupho wesihlahla sesundu," nangokuthi "amaphupho isihlahla sesundu." Kodwa ngolimi Russian igama elithi "iphupho" futhi "Dream" awukaze lahlotshaniswa noma Emagama. Mhlawumbe umehluko ulimi ukuthuthukisa umphumela ebesifuna ukudala Lermontov. "Pine" - aliyona nje ukuhumusha ezinhle. Lokhu inkondlo is eligcwele umoya yokuphelelwa yithemba, okuyinto sici yohlamvu Russian. It kungenziwa bazitshela ukuthi kule incazelo Russian kwephupho kuba iphupho unrealizable.
Ngenxa engavamile unkamisa umsindo kungawufinyelela emsebenzini wakhe Lermontov. "Pine" - inkondlo lapho ngokucacile ivelele vocalism. Ngo esigaba sokuqala futhi zidonse ukunaka kwanoma ezinikezwa we "s" nemisebenti yekwakha emagama. Mhlawumbe umsebenzi wokuhumushela Lermontov master isithombe ngathola isihlahla zikaphayini, futhi isihlahla akuyona besilisa (isib, umsedari), hhayi kuphela ngenxa author umsebenzi wokuqala kwaba ukuveza isizungu, yeka ejwayelekile isihlahla sokusebenzisana udlala kungekho indima. Iphuzu, kunalokho, ukuthi umbhali akusho ngenye baye bakwazi ukufeza obunobunye uhlelo umsindo enjalo.
Mythology waseGibhithe: Choir
Isifaniso engcono "Sofradeks": Izibuyekezo
Entwasahlobo Zezıhlabane "Wave": ikheli, isithombe, ukubuyekezwa